Trigger စျေး - အွန်လိုင်း TRIG ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Trigger (TRIG)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Trigger (TRIG) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Trigger ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $3 747 663.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Trigger တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Trigger များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
TriggerTRIG သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.229TriggerTRIG သို့ ယူရိုEUR€0.193TriggerTRIG သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.175TriggerTRIG သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.208TriggerTRIG သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.03TriggerTRIG သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.44TriggerTRIG သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč5.04TriggerTRIG သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.849TriggerTRIG သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.302TriggerTRIG သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.319TriggerTRIG သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$5.11TriggerTRIG သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.77TriggerTRIG သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.24TriggerTRIG သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹17.12TriggerTRIG သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.38.51TriggerTRIG သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.313TriggerTRIG သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.348TriggerTRIG သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿7.1TriggerTRIG သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.59TriggerTRIG သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥24.43TriggerTRIG သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩270.8TriggerTRIG သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦87.94TriggerTRIG သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽16.79TriggerTRIG သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴6.29
TriggerTRIG သို့ BitcoinBTC0.00002 TriggerTRIG သို့ EthereumETH0.000596 TriggerTRIG သို့ LitecoinLTC0.00421 TriggerTRIG သို့ DigitalCashDASH0.00252 TriggerTRIG သို့ MoneroXMR0.00257 TriggerTRIG သို့ NxtNXT17.84 TriggerTRIG သို့ Ethereum ClassicETC0.0337 TriggerTRIG သို့ DogecoinDOGE66 TriggerTRIG သို့ ZCashZEC0.00278 TriggerTRIG သို့ BitsharesBTS7.05 TriggerTRIG သို့ DigiByteDGB7.32 TriggerTRIG သို့ RippleXRP0.812 TriggerTRIG သို့ BitcoinDarkBTCD0.00788 TriggerTRIG သို့ PeerCoinPPC0.759 TriggerTRIG သို့ CraigsCoinCRAIG104.21 TriggerTRIG သို့ BitstakeXBS9.75 TriggerTRIG သို့ PayCoinXPY3.99 TriggerTRIG သို့ ProsperCoinPRC28.7 TriggerTRIG သို့ YbCoinYBC0.000123 TriggerTRIG သို့ DarkKushDANK73.4 TriggerTRIG သို့ GiveCoinGIVE495.37 TriggerTRIG သို့ KoboCoinKOBO52.11 TriggerTRIG သို့ DarkTokenDT0.211 TriggerTRIG သို့ CETUS CoinCETI660.58